Isithabathaba somthengisi we-Indigo esineminyaka engaphezu kuka-220 / esinolwazi lokuvuna lwemifino nezithelo lwesizini
Ishii-chō, Myōzai-gun, Tokushima-ken, i-Japan
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Shizuya
Le ndlu yesintu endala iyisithabathaba se-indigo esakhiwe ngonyaka wokuqala wesiko (1804) ngesikhathi esikhazimulayo se "indigo".
Isakhiwo esikhulu nombhede (inqolobane elala i-indigo) ibhidliziwe ngenxa yokuguga, kodwa igumbi lezivakashi elinomlando nengadi kuye kwalondolozwa futhi kwasetshenziswa njengendawo yezindlu zasepulazini ukuze isikhathi sigcinwe kancane.
U-"Ai", ongumthombo we-Tokyo Olympics Emblem Japan Blue, ukhulele ezweni elivundile endaweni ephansi yoMfula i-Yoshino futhi waletha ingcebo enkulu esifundeni saseTokushima (Awa Clan).
Ungabona imibhalo yakudala mayelana ne-indigo, efana nezakhiwo zamasiko. Sicela ujabulele umzuzu opholile we-nostalgic kanye nokuthandeka kwe-Japan Blue.
Ungakwazi ukukhetha futhi udle ngokukhululekile izithelo nemifino yezinkathi ezine ezenziwe ensimini eseduze.
* Kusukela ehlobo kuya ekwindla, jabulela amakhiwane amaningi ngendlela othanda ngayo.
Ehlobo: Ikhabe, Isitsha Esihlaza (Ikhabe)
Ekwindla: amakhiwane, amahalananda, ubhatata
Intwasahlobo: Amazambane, ummbila, amahlumela e-bamboo, i-butterbur, i-konjac
Ehlobo: i-ginger yaseJapane, upelepele, isitshalo seqanda, utamatisi, upelepele, ukhukhamba
Ekwindla: Amazambane, i-konjac
* Ukuvuna kuncike enkathini nesimo sezulu, ngakho-ke sicela ubuze kusenesikhathi uma ufisa.
Nakuba kuyindlu yesintu yakudala ekupheleni kwesikhathi se-Edo, uzohlala ekamelweni lezivakashi eliphathwe ngokucophelela umndeni wakho izizukulwane ngezizukulwane.
Sukiya-isitayela Shoin egumbini isivakashi ngenkathi indigo, Yakusugi ophahleni namakholomu, lacquered emabhilidini kanye nokufakwa kwayo, futhi 6 futhi 8 tatami amacansi nge obucayi nail ecashile. Ngithemba ungakwazi ukujabulela emkhathini.
Sicela uqaphele ukuthi amakamelo amabili ahlukaniswe kuphela kuze kufike ku-fusuma futhi awawona amakamelo ahlukene ngokuphelele, futhi kune-air conditioner eyodwa kuphela.
Njengoba ungahlala ungadlile, sicela uzilungiselele ukudla kwakho ekhishini noma udle ngaphandle. Ukulethwa nakho kungenzeka.
Izindawo zokosa inyama nazo ziyatholakala, ngakho sicela ucele kusenesikhathi.
Ngezithako zokuziphekela, sincoma isitolo somlimi esiseduze esiqondile, "Hyakka Ichi," kanye "Nemyuziyemu ye-Awa Shoku," enemikhiqizo yezolimo neyasolwandle kanye nemikhiqizo ecutshunguliwe eqoqwe kusukela kuso sonke isifunda sase-Tokushima.
Kulabo abafuna i-dry sake, sincoma umenzi oseduze we-Naruto Kintoki Shochu.
omatilasi abangu- 2
4.93(100 okushiwo abanye)
4.93 out of 5 stars from 100 reviews
4.93 · 100 okushiwo abanye
・ Ihhotela lisedolobheni lase-Ishii engxenyeni esempumalanga yeSifundazwe sase-Tokushima, cishe imizuzu engama-30 ngemoto ukuya enkabeni yeDolobha laseTokushima, futhi ungajabulela i-Awa Odori.
・ Kukhona neMuseum of Art edumile yase-Otsuka, futhi cishe imizuzu engama-40 uma uhamba ngemoto uya eNaruto City, edume ngama-whirlpools.
・ Indawo yentaba ・ Imizuzu engama-20 ngemoto ukuya eKamiyama Town eSudachi.
・ Kuwuhambo lwemizuzu engama-40 ukuya eMisato Village of Fireflies nase-Ume nase-Wakimachi yaseMima City, ngakho-ke ingasetshenziswa futhi njengendawo yokudlulisela.
・ Ibanga ukusuka kuNombolo 1 ukuya kuNombolo 18 kwezingu-88 zezindawo zoHambo lweShikoku zingafinyelelwa ohambweni losuku. Uma uhlala ubusuku obulandelanayo, ngicabanga ukuthi ungabusebenzisa ngokuphumelelayo.
Sisesakhiweni esikhulu esingumakhelwane, ngakho-ke sicela ukhululeke ukusithinta noma nini.
UShizuya Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: I-Hotels and Inns Business Act | 徳島県東部保健福祉局 | 徳島県指令東保第44122号